PSJTV | “धारणाहरु स्वतन्त्रताका शत्रु हुन्”
बुधबार, १९ असोज २०७३ पिएसजे न्युज
हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्व अनन्त वर्तमान मा आधारित छ। शायद त्यसैले जीवनले प्रायश: आफै निरन्तर गति को स्वरुप ग्रहण गरि जिउने चाहनाको अनन्त शृंखला बीचबाट त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रयत्नमा लागिरहन्छ। जसले एउटा निरन्तर गति स्थापना गर्दछ। यहि गति नै अस्तित्वको मुख्य आधार हो। हाम्रो जीवनको प्रत्येक घटनाहरुको एक क्षण मात्र हामी त्यसलाई "अहिले" भन्ने सामर्थ्य राख्छौं। केही क्षण पश्चात नै यो अहिले "अघिनै" बन्दछ। हामी सबै भोलि हुनसक्ने सम्भावित सुखको अपेक्षामा रहन्छौ। तर संग संगै बितेको क्षणमा अनुभूत या आर्जित बस्तुलाइ पनि छोड्न चाहन्नौ। अन्तत: वर्तमान लाइ एक अस्थाई अनुभूतिको रुपमा लिई जब मृत्यु को मुखमा मा आइपुग्दछौ, तब सबै बितेको घटनाहरुको पुनः परिभ्रमण गर्दछौ र पश्चाताप पूर्ण अनुभूत गर्दछौं। "जानी नजानी जीवन बेकार मा सकिएछ" , हामी तत्क्षण पनि भविष्यको सानो झिल्को को आश राख्दै ति कुराहरुको अबोध समाप्तिको धमीलो अनुभब गर्दछौ। अस्तित्वको बिराट स्वरुपमा शुन्यताले आफ्नो स्वरूप आफै ग्रहण गर्दछ। व्यक्तिगत सीमा र समयको अनन्तता भित्र शुन्यताबाट निरन्तर निर्माण को प्रक्रिया द्वारा जीवनको चाहनाले स्वतस्फूर्त ब्रम्हाण्ड को अनन्त निर्माण निरन्तर गरिरहन्छ। समयको सानो एकाईले अनन्त भित्र प्रत्येक बस्तुको मूल्य लाई क्षण क्षणमा अबमुल्यन गरिरहेको हुन्छ। प्रकारान्तरण सबै बस्तुहरुको तात्कालिक उपस्थिति र मुल्यले आफ्नो अस्तित्वलाई बिनाश र नया ढंगले रुपान्तरण गरिरहन्छ ।
यदि हामीले साँच्चिकै गहिराईमा गएर आफैलाई नियाल्ने हो भने अनन्तता आफैमा समाहित पाउनेछौं। र, त्यस अनन्ततामा हामी प्रत्येक क्षण जीवन पुनर्जीवित भइरहेको पाउनेछौं । प्रतिविम्बित प्रकृतिको यो अनन्य संयोग ले एउटा बिश्वास र सत्यलाई साक्षीका रुपमा उपस्थित गर्दछ। तत्क्षण, एक मात्र समय र वर्तमान मा आनन्दित हुनु मात्र जीवनको अर्थ ठहर्छ। अन्य सबै आकांक्षित कुराहरु भ्रमित र गौण हुन जान्छ । हामी बालक हुँदा त्यो हाम्रो खोजीको समय थियो। म किन म छू ? म किन यहाँ छु ? म किन तिमि होइन? म किन त्यहाँ छैन? यी सबै कुराहरु कहिले सुरु भयो ? अनि यो आकाश कति टाढा सम्म छ ? यो धर्ति को अन्तिम भाग कहाँ हो? म जे देख्दछु, जे सुन्दछु के यौ भ्रम मात्र हो? के यो जगतमा साचिकै भगवान वा राक्षस को उपस्थिति छ? म को हु ? वा म के हुदैछु ? तर हामीलाई यी सम्पूर्ण प्रश्नहरुको स्वाभाविक उत्तर दिइयो,जुन कथित सामाजिक मूल्य र मान्यताको रुपमा स्थापित छ। हाम्रो पाठ्यक्रमहरु तिनै भद्दा बिषय र तर्कले भरिएका छन्। हाम्रो इतिहासमा तिनै बिषयहरुको गुणगान गाइएको छ। जसले यी तमाम प्रश्न हरुले खोज्न सक्ने असिमीत जीवनको उत्तरहरु माथि पुनर्प्रश्न गर्न हामीलाई बन्चित गरिदिएको छ। सोच्न बन्द गरिदिएको छ। एउटा नयाँ बालकाकृति, एउटा नया खॊज ,एउटा नया उत्साह ,एउटा नया विचार को गर्भमै हत्या गरिएको छ। निरन्तर निरन्तर-हर पल हर क्षण। हामीहरु बीच हामीहरुले नै सीमारेखा कोरेका छौं। जो आदिम सभ्यत्ता भन्दा बिशालतम र अधिक गहिरो रुपले मन मस्तिस्कमा स्थापित भएको छ। प्रत्येक सडक, टोल हरुमा सामाजिक दायराहरुमा, प्रत्येक भुखंड को बीच, प्रत्येक मन बीच देखिने- नदेखिने हामीले सिमा हरु बनाएका छौ , हामीले आफै ले आफैलाई बाधेका छौ ,यदि कसैले यसलाई नाघ्ने साहस गरेमा एउटा मुर्ख हिम्मत मानेर हामी सामाजिक रुपमा बहिस्कार गर्दछौ , पागल वा अपमानको व्यवहार सिर्जना निर्माण गर्दछौ। हामीले ले यो विषम घडीमा हरेस नखाइ, नजरअँन्दाज नगरिकन मानब जातिको बीचबाट अलि अलि बचेको मानवता को संग्रक्षण गर्नु पर्नेछ। जसले बाकी असंग्ख्य मानब भ्रुण को रक्षा गर्नेछ। यसकालागी सर्वप्रथम हामी आफै स्वतन्त्र हुनु जरुरी छ।
अब यो बिषय गम्भीर बनेको छ। समय संगै हाम्रो उमेर संगै अनि हाम्रो बिकाश संगै यो बिषय अत्यन्त गम्भीर बनेको छ। न हामी कहिल्यै एक्लो थियौ न त अरुसंगै नै तर अब एक्लो तर पूर्ण, एक्लो तर स्वतन्त्र ,संयोगहरु भन्दा बाहिर गएर, भाग्य भन्दा बाहिर एउटा निर्णय, एउटा त्यस्तो कथा रचना जस्तो अर्को कुनै कथा छैन, एउटा साझा आनन्द को अगुवाई जो हामी सबै चाहान्छौ,बीर योद्दा राजा हरु हैन बरु शान्तिको पारखीहरु,अनि सम्पूर्ण ब्याप्त भावको, समानताको कथा हरु निर्माण गर्न हतारो भैसक्यो। हामी नै अहिले को समय हो। मात्र हामी होइन, पुरै दुनिया हाम्रो गतिबिधि र निर्णय संग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सम्बन्धित छ। केवल हामी ती भाबको प्रतिनिधित्व गर्दछौ। तर नियालेर हेर्यौ भने, सिंगो संसार उस्तै सपना देखिरहेको छ। जस्तो हामी चाहन्छौ। हरेकको मनमा एउटा सपना छ। तर यसलाई पूर्ति गर्न ,घटनाहरु लाइ तटस्थ रुपमा देख्नु सक्नु पर्छ। जसरी एउटा डाक्टर बिरामीलाई छामेर महसुस गर्दछ। आफ्नो मनोभाब लाइ काबु मा राखी बिरामीको सफल उपचार गर्दछ। मान्नुहोस, मेरो अगाडी एउटा स्याउ छ। सामान्य अबस्थामा म पहिले त्यस्लाई सफा गर्छु। अनि स्वाद लिदै खान थाल्छु । मलाई पहिले नै थाहा छ, एउटा स्याउको स्वाद कस्तो हुन्छ! त्यसैले यदि स्याउ अलि काचो वा बढी पाकेको भए म त्यस स्वादबाट असंतुष्ट हुन्छु, र- निराश, नमज्जा लिदै निल्छु ।अथवा यो मैले अनुमान गरे जस्तै ठाक्यै त्यहि स्वादको पाउँछु। पुनः कुनै रहश्य, कुनै ताजगी, कुनै उत्साह बिना नै स्याउ निल्छु र आफ्नो काम को लागि निस्किन्छु। पहिलो अवस्थामा, स्याउ को स्वाद मैले भनेजस्तो भएन। मेरो आशाको पूर्ति नभएको ले यो निराशाजनक रह्यो। दोश्रो अबस्थामा, यो कुनै उत्साह बिना को रह्यो। किनकि यो मैले आशा गरे भन्दा कुनै फरक थिएन। जो मेरो स्मृतिमा पहिल्यै संग्रहित थियो। अब फेरी एक पटक कोशिस गर्छु। कुनै संभावित स्वाद को आशा बिना नै यो स्याउ कस्तो स्वाद को हुन्छ ? मैले कहिले पनि स्याउ कस्तो स्वाद को अनुभब गरेको छैन। त्यसैले मलाई यसबारेमा केहि पनि थाहा छैन। त्यसैले अब म एउटा नया स्वाद को लागि उत्सुक र सम्भावित उत्साह को लागि बल्ल तयार हुनेछु। अब म स्याउ सफा गर्छु। आफ्नो सबै ध्यान त्यो स्याउ सफा गर्नमा केन्द्रित गर्छु। अनि अनुभव गर्छु, यसको बनावट, रसायन, स्याउको बाहिर आवरण, भित्री रेशादार संरचना र जब म यसलाई चपाउन थाल्छु, मेरो जिब्रो मा रहेको रस ग्रन्थीले यसको मिठास अनि एउटा सम्पूर्ण नया स्वाद म लिन सक्छु । यद्धपी, मलाई यसबारे केहि थाहा थिएन ,कहिले पनि यो स्वाद को बारेमा सुनेको जानेको थिईन । तर म अहिले सम्पूर्ण चेतना मा एउटा नया स्वाद को अनुभूति गर्दैछु ,र तत्क्षणमा जीवनको स्वाद लिएर पूर्ण वर्तमानमा बिना कुनै पूर्वस्मृति वा अबरोध तर एउटा नया उत्साह को साथ जीवन बांच्दैछु। यो मेरो नयाँ जीवनको सुरुवात हो। मान्छे को जीवनमा यो स्याउ जुन सुकै बिषय बस्तु हुन सक्छ। जुनसुकै अनुभव,हामीले भेटेको एउटा नयाँ व्यक्ति, एउटा चिया वा एउटा नया कार्यभार, कुनै विचार जो हामीमा अनयास आयो। कुनै वार्तालाप जो हामी शुरु गर्दैछौं। आशा राखेर या कुनै दृष्टिकोण को साथ् अगाडी बढ्दा सम्भावित परिणम ले हामीलाई दुखी बनाउन सक्छ। निराश बनाउन सक्छ। या त सधै आईपर्ने नियमित बकबास लाग्न सक्छ। यसरी नै जीवन अर्को निराशा र बकबासको पछि बिना उत्साह निरन्तर हामीले चाहेर वा नचाहेर अगाडी बढिरहन्छ। यसको बिपरित, हामीले प्रत्येक क्षणलाई, प्रत्येक कार्यभार, प्रत्येक बिषयबस्तुलाइ कुनै आशा र दृष्टिकोण बिना तटस्थ रुपमा हेर्ने हो भने बास्तबिक रुपमा घटना र प्रकृतिको साँचो अनुभव हाम्रो सामुन्ने उपस्थित हुन्छ। अनि, त्यस समय मा हामी अनुभव गर्छौं, कसरी क्षणहरु वास्तविक रुपमा स्वागतयोग्य छ, कसरी हरेक घटना हरु रहश्य र उत्साहले भरिपुर्ण छ ! कसरि जीवन पूर्णत: अविछिन्न अनि रोमान्चक र जीवित छ, जो यस अघि हामीले कहिल्यै कल्पना गरेका थिएनौं। अनुभब गरेका थिएनौं। यो नया प्रकियाले हाम्रो सम्पूर्ण जिबन लै क्षण भरमा बदलिदिन्छ। एउटा नया दुनिया सामुन्ने सुरु हुन्छ। यसको अर्थ हामीले कुनै विचार नै नराख्नु, कुनै पूर्व ज्ञान स्मृती को उपयोग नै नगर्नु बरु निन्दा गर्नु भन्ने बिल्कुल होइन। बरु ति विचार लाइ गहिरो संग नियालेर त्यसको महत्व वा असर लाइ तत्क्षण नै सुल्झाउनु हो, यसको अर्थ हामीभित्र आफैंले सूचना नराखेका हाम्रा निराशाहरु, आशाहरु, रिशहरु ,दुखहरु ,बदला भावनाहरु र एक्लोपन आदि लाइ अत्यन्त गहिराई मा बुझ्नु हो, जसले कसरि हाम्रो जीवनलाई जीवित हुन बाट हाम्रो स्वीकृति बिना नै रोकी रहेको छ। यसको अर्थ ति बिषयहरु जसले हामीलाई हामी बन्नबाट रोकिरहेको छ, ति समस्या हरुको उम्मुलन हो र हामीभित्र को सबै सम्भावना सहित को वास्तविक हामीलाइ बाहिर ल्याउने सुरुवात हो।